Mai Chibwe VekwaZimuto: Anniversary dzemumusha
Ngatimbotaura nenyaya dzokuyeuchidzana mazuva akakosha mumusha. Nyaya idzi todzipa kuvarume vedu kuti vahwisise kuti ndivo madzishe saka ndivo vane basa rokuziva mazuva. Hurumende ndiyo inotaura yega kuti nhasi izuva re Public holiday. Ishe ndiye anosarudza musi wechisi. Sabhuku ndiye anotaura musi wedare. Saka nyaya yedu nhasi yakarerekera kuvarume vedu asi isu tine zvokuitawo pazviri.
Varume vanoshushikana nenyaya yokuda kutonga pamusha. Vanoona sokuti murume akaonekwe seane moyo munyoro mukadzi anokwanisa kumudherera. Kufunga kwakadai kunobva pakushaya CONFIDENCE yokuti ndiwe mukuru pamusha. Kana uri mukuru uye uchizviziva wega, hapana chinombokunetsa. Ukangogara pamusha wako uchiita mabasa emunhu mukuru, mukadzi anongokutora somunhu mukuru pasina mubvunzo. Kuti zvikasire kuitika izvi murume ngaaratidze kuti anokoshesa mukadzi wake. Vakadzi takakmboregwa pakuti hatinetsi kufadza. Murume anongofanira kuratidza kuti fungwa yake inogara ichindifunga nguva nenguva. Akabuda mumba akaenda kwaaenda haakangamwi kuti asiya mukadzi mumba. Anofanira kuratidza kuti kupatsana kwaaita neni kwamushaisa mufaro uye mufaro uyu unodzoka kana adzoka kwandiri.
Ndini mai vemba yake, mai vevana vake, shamwari yake yepamoyo, murudzi wemufaro wake, munhu anoziva zvese zviri pamuviri wake nemashandire azvo. Saka ndini ndinayewo pamoyo. Iye anofanisa kusandikangamwa. Saka murume anofanira kuratidza sei fungwa dzakadai.
Imwe nyaya inoshanda ndeyokuti murume azive nezvemaruva. Kugarotengera mukadzi maruva chnhu chakanaka chose. Ruva chinhu chinoitika pamuti kana imwe mbeu kana chimwewo hacho chinokura muvhu. Ruva rinotaridza kuti upenyu huri kuenderera mberi nokuti ruva rinoti rapera poita mhodzi dzinoti dzakora dzokwanisawo kudzvagwa dzoita humwe upenyu. Ruva rinotaridza kutangazve kweupenyu utsva. Panesu vaviri, ruva rinotaridza kutangazve kwerudo. Rudo rutsva rudo rukuru. Saka kana murume achiunza maruva kumukadzi wake anunza rudo rutsva.
Hino kune vamwe varume vanounza maruva kana vamborova mukadzi madeko. Maruva aya iota sokushandiswa kukumbira ruregerero. Ndizvo hazvo asi ukajaira kudai musoro wemukadzi unozofunga kuti maruva anobva pakurohwa. Kana warova mukadzi, zviri nani usamuunzira maruva pakukumbira ruregerero. Wana chimwe chinhu chakaita sehuku mhenyu kana mbudzi yaunoudza mukadzi wako kuti muripo wekukanganisa kwawaita. Maruva ndeevanhu vane rudo kwete vanorovana mumba mavo.
Saka unoziva sei musi wekuunza maruva. Maruva angangohi zuva nezuva anobva ajairigwa oshaya chiremera mumoyo momukadzi. Murume wana mukana wekukoshesa maruva musi waunouya nawo roita zuva rakakosha. Mazuvano vanhu vakawana mukana nokukoshesa mazuva anohi ma ANIVERSSARY, kureva musi unofungwa chinhu chakaitika rimwe gore pazuva iroro romwedzi. Toti machata musi wa 25 December 2013. Gore rimwe nerimwe pazuva iri murme anouya nemaruva kumukadzi wake kuratidza kukoshesa zuva iri.
Kuti mazuva akadai awande, ndanyora pano ma ANIVERSSARY akawanda anofanira kufungwa nomurume kuti aratidze kuti anokoshesa kuva nomukadzi wake. Mazuva awa anokupazve mukana wekurangaridza mukadzi wako chimwe chinhu chaunokoshesa chinoitwa nomukadzi, zvadaro iye haazokangamwi kugarochiita nokuti anoziva kuti unochifarira. Murume anonyorawo kandima kokurondedzera kuti maruva awa abva panyaya ipi.
1 Yokusangana kwenyu
Musi uno mugore rokuti, ndakasangana newe panzvimbo yokuti . ndinogarofunga kuti dai ndakangoti nonokei ndikasasangana newe dai upenyu hwangu husina mufaro.
2 Yokubvumirana kudanana
Msi uno mugore rokuti, wakandipa rudo. Nanhasi ndine rudo gwako.
3 Yokutanga ita chimwe chinhu mese
Msi uno gore rokuti, wakaenda neni kundoona firimu rokuti, zvikandidadisa kuziva kuti unondida.
4 Yokukisana kwenyu
Musi uno mugore rokuti wakandikisa kokutanga. Kisi iyoyo handiikangamwi nokuti yakandifadza chose.
5 Yokuzvagwa kwemukadzi
Musi uno ndnotenda vabereki vako vakakuzvara kuti uzoita mukadzi wangu.
6 Yokuzvagwa kwemurume
Dai ndisina kuzvagwa dai ndisina kuziva mufaro waunondipa. (Reverse role apa. Murume anotengera mukadzi maruva asi iBD yake iye murume)
7 Yokutanga kuvatana kwenyu
Musi uno gore rokuti wakandiratidza rudo pachinhanho chakakwirira tikasimbisa rudo gwedu.
8 Yokusangana nevabereki vak/vako
Musi uno gore rokuti wakandi kumbirira vabereki vako kuti ndiitewo mwana wavo. Wakada vabereki vangu vaite vako.
9 Yokuroorana kwenyu
Musi uno gore rokuti wakava mukadzi wangu weupenyu hwedu hwese.
10 Yokutanga kugara mese
Musi uno gore rokuti takatanga kugara tese
11 Yokutenga imba mese
Musi uno gore rokuti takatenga imba yedu yokurerera mhuri yedu
12 Yokuziva kuti ane mimba
Musi uno gore rokuti takaudzwa kuti tine mimba yedu
13 Yokuzvagwa kwemwana wenyu wekutanga.
Musi uno gore rokuti wakazvara mwana wedu ane makore okuti nhasi.
14 Yokutenga mombe yenyu yokutanga
Musi uno gore rokuti wakaratidza kuti uri muvaki nokutenga mombe yedu yokutanga tiri tese
15 Yokuzarura bhizimisi renyu
Musi uno gore rokuti Takazarura bhizimisi redu ukataridza kuva mai vemusha pakuva vahosi vekuungana kwemhuri
16 Kana mukadzi murume akambopinda muchipatara, rangarira zuva rokubuda kwake
Musi uno gore rokuti wakagwara zvikandidya moyo chose. Ndinotenda nokupona kwawakaita.
17 Kana ukamboinda Joni, rangarira zuva rokudzoka kwako
Musi uno gore rokuti handikangamwi fungwa dzangu muzhira yese kubva Joni ndichiziva kuti wakandimirira.
Morangarirazve naya dzorufu dzinova dzinorangaridza vanhu kuti upenyu hune mugumo uye mugumo wacho hatimuzivi saka kana tiri vapenyu kudai ngatiitirane rudo uye tinakigwe noupenyu nokuti chipo chatakapiwa chine nguva inoverengwa namakore mashoma. Kana pana hama yenyu yakashaika sokuti mwana wenyu kana kuti mubereki wemurume/mukadzi munowana kanguva kokutaura nezvazvo nokutenda nguva yamakaita nehama iyi. Mowanawo nguva yokutenda nenguva yamunayo imi pauviri hwenyu nokupanana rukudzo kuti mese makasarudzana mukadanana uye muchiri mese kureva kuti mune rudo.
Kana makafgwa nomwana uchaona kuti mukadzi wako panguva iyoyo anosuruvara kana achifunga mwana wake. Ndiyo nguva yokuti muve pamwe chete. Ratidza kuti iwe hauna kukangamwa mwana wenyu.
Mukadzi kana awanawo murume akadai, anogaromurangaridza mazuva akamukoshera paupenyu hwenyu, chiratidzawo kuti unokoshesa fungwa dzomurume wako anokuda seizvi. Murume musi waanounza maruva okuudza zvaaunzira maruva kuti zuva iri izuva rakaita sei, chirikoshesawo iwe. Kana musina vana hapana chokumirira. Tanga kutenda nokudiwa kwaunoita.
1 Bikira murume zvbokudya zvinotaridza kuti izuva rakakosha.
2 Ita nyaya dzinorerekera kukukosha kwezuva iri. Kana usina nyaya nazvo bvunza murume mibvunzo akuudze ugotaura kukosha kwazvo kwauri iwe
3 Isa maruva aya paanoonekwa nevanovhakasha wosiya chikadhi chine rondedzero iya chiripo kuti vaone ugotaura masho okudada nazvo. Kana zvichinyadzisa bvisa chikadhi usiye maruva aripo. Kana shamwari dzako dzikauya usasvoda kudziudza chikonzero.
4 Pakunovata musi uyu, taridzawo kuti izuva rakakosha rinofanira kuitwa zvakakosha. Varume vanowanzo farira APPRICIATION iri DIRECT. Rondedzera kuti uzere norudo uye kudada nemanyawi aakupa kukuratidza kuti anokuti. Chimubvunza chinhu chiri SPECIAL chaanoda nhasi womuudza kuti chero chaada unomupa. Kana asarudza mupe nomoyo wese. Kana wange wakaneta wabva kuSHIFT, udza murume mukasire kundovata uite zviitwa ugowana nguva yokuvata yakakwana. Kuchidzira moto pakusangana kwenyu.
5 Kana iri BIRTHDAY yomurume wako, mira mirawo nezvokudya nokudaidza shamwari dzake muungane ugoitawo chimwe chakakosha chaunotaura pagungano. Hazvirevi kuti unoita PARTY asi kungodanawo imwe hama kana shamwari kuti muve pamwe chete modya mese, wotaura zvinokoshesa zuva.
6 Usakangamwa kutenda murume pakukukoshesa nokukufnga nokukupa rudo nokukuitira zvakanaka zvinokufadza. Appreciation breeds appreciation.
Mese hwisisai kuti mumhuri yakadai kupopotedzana kunoita kushoma nokuti mese munoziva zvinofungwa noumwe. Harisi zuva rinohi rakakosha asi kuti munhu waunaye ndiye anokoshesa zuva iri nezviito zvake pauviri hwenyu.
Vakadzi tinopa varume vedu umambo hwemusha zvisingarevi kuti murume mudzvanyiriri asi kuti munhu akakosha pamabasa ake apamusha zvokuti ndiye mukuru. Hazvifaniri kuti ave nenguva yaanoita sokusabvimugwa kuva mukuru. Hazvibvi pakutaura kana pakupopota kana pakupiwa zvipo asi kuti zvinobva parukudzo kubva kwamuri mese. Kana mukdzi achitukana nomurume hazvirevi kuti ari kuti murume haasi mukuru. Ari kuti wandigumbura saka gadzirisa pawakanganisa. Kuva mukadzi wemunhu iVOLUNTARY PROCESS. Kupa murume umambo iVOLUNTARY PROCESS yokuti musha imiri ine mutongi anohwisisa kuti mukadzi diye akazvininipisa kuva pasi pemurume kwete kuti i RIGHT yemurume. Sakai we murume wapiwa umambo uhu chitaridza ushe amhuri yako. Koshesa mukadzi pane zvaakakuitira nezvaari.
Pese pese panodiwa mufaro nyaya yemari hainonoki kuvapo. Kune varume vanoti nyaya dzema ANIVERSSARY idzi dzinopedza mari profit yacho isinganyatsi kuonekwa. Profit yorudo mumbo ihuru chose. Kamari kaunoshandisa kutenga maruva kashoma chose chose pane zvaunowana. Hwisisa kuti mumba kazhinji zvinhu zvinotengwa ndezvenyu mese. Mukadzi haanawo chinhu chaanoti ichi ndechake ega. Maruva ndeake ega asi anofa kwapera vhiki posara pasinazve chinhu chaanoti ndechake.
Murume imbosvikawo kumba kwako ufambe fambe mumba uchitarisa zvinhu zvinohi ndezvemukadzi wako zvisinei nemhuri zvisiri membhe dzokupfeka. Uchaona kuti zvishomanana. Ndosaka tichiti imbopawo mukadzi wako manyawi umwe musi.
Posted by Mai E Chibwe at 01:58